Anyị na-alụ ọgụ maka Human Rights! ∴ www.PixelHELPER.org
Ọ bụrụ na inwee nsogbu ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga - eme, wee chọọ PixelHELPER
Holocaust Memorial Marrakech maka ndị LGBT echefuru ndị ọchịchị aka ike Nazi na Morocco. Gọọmenti mgbochi LGBT nke Morocco bibiri.
Tweets sitere na PixelHELPER
pixel Inyeaka ele anya n'ụwa dum Onye na-eme ihe nkiri & onye na-ese ihe maka ikike mmadụ megide Mmegbu & maka nnwere onwe ikwu okwu ịlụ ọgụ. Anyị jiri nka chọọ nsogbu ndị dị mkpa rụtụ aka. Anyị na-arụkwa ọrụ Ọrụ enyemaka mmepe na Afrịka. Nwe Ndị na-eme achịcha achịcha mepụta ka iwelie ihe Nkwụsi ike n'ihe oriri maka Ogige ndị gbara ọsọ ndụ, Mpaghara esemokwu & ọdachi ndị na-emere onwe ha achịcha na-adịgide adịgide Anyị na-abawanye na Nkwụsi ike n'ihe oriri n'Africa. Na mpaghara Enyemaka mberede PixelHELPER na-anwale ụlọ ọrụ nri achịcha mkpọ na Afrịka dị nso Ogige ndị gbara ọsọ ndụ UNHCR imeghe obere ụlọ ọgwụ akpa eji ebu igwe. Biko nyere anyị aka na Nye onyinye menu ma kwado ọrụ nke nzukọ anyị.
Angela Merkel nyere Julian Assange mgbapu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Video nka katuunu
Omume na-emepụta obodo! Dị ka ogologo oge anyị Menschlichkeit,Liebe na ọchị jikọọ, ọ nweghị ihe dị anyị mkpa ekewapụ, Omume na-agba ha ume Toleranz, Ngosiputa ihu oma na ndi di ọcha ọchị, na nha nke free ụdị onye ziri ezi, ezigbo ebumnuche nke ndị mmadụ sein.
Ntughari ọkụ na Hotel Sonnenbichl, oche ndị German nke eze ịta ahụhụ nke Thailand.
Site na anyị arụ ọrụ Ka anyi mee uwa ebe ka mma na iduga ya mgbanwe ndi mmadu, na-achọ ihe omimi ndi ochichi onye ochichiNa aha nke Toleranz sollte pixel Inyeaka ekwu ihe ziri ezi, b ekweghị ibe nọrọ ịhapụ ịnagide. Ihe a na-elekwasị anya bụ ọrụ maka nkà nnwere onwe, ruuru mmadụ na imegide Anti-Semitism.
Mee ihe na-ezighi ezi maka ezi ebumnuche!
Agbanye na onu ogugu ndi Alakụba bi na Morocco, anaghị akwado Uighurs na China. Anyị wuru ihe ncheta maka nke a, nke ndị Arab lara naanị hụrụ mgbe akwụkwọ akụkọ n'Israel kọọrọ ụdịrị ncheta ncheta nke Oké Mgbukpọ nke Berlin. BBC Arabic dere na ọrụ ahụ. Nke a kpalitere ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba ụwa nke mkpuchi ahụ anaghị elekwasị anya na Uyghurs kama esemokwu Israel / Palestine. Ihe osise gara nke ọma!
Akụkọ banyere Oké Mgbukpọ Moroccan na Wikipedia ekwughị banyere ogige ọrụ ohu n'ọzara ebe ndị Juu nwụrụ. Ngalaba nke ime obodo nke Morocco mebiri ncheta anyị mgbe otu afọ wuchara ya. Anyị webatara isiokwu nke ọrụ mmanye n'ime akụkọ ihe mere eme nke Morocco na Wikipedia iji lụso ọgụ megide akụkọ ụgha & mgbochi Semitism. Na na agbanyeghị na ọ bụ ntinye ihe nka site na mbido ịdọrọ uche gaa na nke ndị China mebiri ikike ruuru mmadụ n'ihe gbasara Uyghurs.
Ngwurugwu nka bu ihe omuma na agha efeghari ihe omumu iji luso oke ogu nke ndi Alakụba na ikwuputa ndi oru ndi echefuru echefu n'ime Wikipedia.
O bu ihe nwute, Morocco amaghi udi udiri ihe ndia. Ndị otu ahụ
Na saịtị anyị dị na Moroccan, ya na ihe mgbanaka nke ụlọ elu nke Orthanc sitere na Onyenwe nke Mgbaaka, ndị isi Morocco na-eme ka ndụ sie ike. E bukọọrọ nri ofe maka mmadụ 500 si na German THW, ili maka onye ọrụ mmepe German nke nwere ndị na-eji bulldozers na ebe a na-eme achịcha mmepe, nke ndị bi na ya ga-erite uru ozugbo, gbadara na ala.
anwụ pixel Inyeaka lụọ ọgụ na njikọ zuru ụwa ọnụ nke ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-ese ihe ụzọ pụrụ iche megide nsogbu ndi mmadu. Ndị na-ese ihe na-esonye na-ejikarị teknụzụ kachasị ọhụrụ na ihe niile nke satire etinye nsogbu na mgbado akụkọ nke mgbasa ozi.
Adabeghị mbà site mkpọtụ nke ụwa anyị na-eje ije, jụụ na mma, adịghị atụ ụjọ na ihe ize ndụ na-echebe elu mgbaru ọsọ n'uche gburugburu Earth. bụ anyị isi nkwenkwe na ụkpụrụ nke French mgbanwe bụ "nnwere onwe, hara nhata, fraternity" gbakee ibuso ugboro ugboro nke na ndọrọ ndọrọ ọchịchị enweghị mmasị.
Mbibi nke Jehova Gọọmentị Moroter Walter Lübcke.
Onye isi ala Bundestag Wolfgang Schäuble kwuru na Bundestag nke ahụ Lübcke "Mepere emepe maka ntinye nke ọha anyị mepere emepe na-ewu: maka ịkwụwa aka ọtọ, ndidi na mmadụ. A na-achọ nnwere onwe nke nka n'ụwa niile Ya mere PixelHELPER!
Onye guzobere PixelHELPER bụ onye omenkà ọkụ Oliver Bienkowski si Germany. Ndị ọzọ na-ese ihe ọkụ ọkụ na ndị na-eme ihe nkiri na ọtụtụ ndị na-ahụ maka caricaturist gbasaa n'ụwa niile wee rụọ ọrụ ọnụ maka PixelHELPER maka ụwa ka mma.
Naanị ndị na-eche echiche dị iche na-agbanwe ụwa
Ma anyị iwe bụ ihe kwere nghọta, na-atụle ihe anyị tara ahụhụ. Kedu ihe anyị kwesịrị ime? nne na nna ochie Na-ese tii maka Bigwigs na Ceylon?
Kedu ihe anyị nwere nne na nna echere A na-egbu osisi owu maka ndị India, na ndị ogbenye Saxon na Copper na Coltan mines dị nso na Dresden, dịka ka Ihe igwe eletriki 30 nke Congo Congo kwa otu nwere.
Na Kakao na Ebe ndị a na-edozi na Palatinate! Ọgbọ nke Palatine nwere nke aka ha Ahụike dara maka ndị ọjọọ ahụ Ụlọ ọrụ Africa. Na Ugbo ogwu ndi Somali nke mere ka Oké Osimiri Ugwu di na efuỌ bụ ya mere ọtụtụ ndị ji aga ugbu a Frisian East Firesi -abụ.
Ihe niile ndị enyí anyị gbara ya, maka ya Etu uzo na igodo piano, Ugbu a, ị na-abịa na ha jeeps na-eme safari na anya nke ikpeazụ elephants na Bavarian Forest on. Nke ahụ siri ike.
und azụ mgbe Herero wakporo Germany, na nke a Ogbugbu e mere megide ndị Swab, Nke ahụ na-arụ ọrụ mgbe. Ihe dị ka nke ahụ, ị ​​ga-akụtu onwe gị n'àkwà, Ọ ka na-afụ ụfụ mgbe afọ 100 gasịrịỊ naghị agbake ngwa ngwa.
Anyị na-eguzo n'ebe a ikpere anyị chemicals na-egbu egbu, ị nwere ike na Bangladesh maka 7 Euro Jeans nwere ike.
Mmadụ ole n'ime ụmụ anyị nwanyị ka anyị tụfuru Diamond mines na Bielefeld, nke mere na Na-akwụ ụgwọ na Sierra Leone nwere ike ịbụ abụ "Dayamọnd bụ ezigbo ụmụ agbọghọ. ”, Ugbu a, ha na-abịakwa na Mediterenian ma ha ka chọrọ ya bi na gyms anyị.
Ee, ihe ọzọ? Kedu ihe ọzọ anyị kwesịrị ime maka gị? N'oge ụfọdụ, ọ gafereN'oge ụfọdụ anyị enweghị ike imekwu ihe! N'oge ụfọdụ, ọ gaghị adị ọzọ!
anyị Obi dị anya, aber anyị nwere ike imecha.
Anyị. Ịgbaji nkeji usoro dị ka ihe dị oké mkpa nke imepụta ihe
Kedu ndị PixelHELPERS?
Robin Hood Onye ọ bụla maara. Aha ọjọọ abiatibet N'ịbụ na-esiwanye ike rivalsonye ọ bụ ọrụ ya ka ọ ka dị ama ga-akariri nke mbu. Na PixelHELPER International na-arụ ụka Ndị na-ese foto nke ụwa 70 maka otu ụwa ka mma, nara n’aka ndị ọgaranya na Europe ma nye ndị ogbenye n’ụwa niile. Anyị nọ na. Ya na ìgwè ndi ya kwesịrị ntụkwasị obi nwere PixelHELPER dịka nzukọ maka ruuru mmadụ isi ụlọ ọrụ ya Afrika hụrụ. Ruo ọtụtụ afọ, anyị na-alụ ọgụ Enyi & onye nchebe nke ndị ogbenye na dị ka onye a ṅụrụ iyi onye iro ndị Ike & akụnụba ka Mmegbu mmegbu.
Achịcha nri mberede na Morocco
"The PixelHELPER tinye onwe ha mgbanwe ụlọ ngọngọ na nkà & satire na ọrụ ha"
kwuru Ụdị redio Germany
Pifọdụ na-ekwu, sị: "PixelHELPER bụ otu n'ime ihe ndị na-agbanwe agbanwe ihe na-emepụta ihe omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma na-anọchi anya ụdị ọrụ nka agbasawanye. Anyị na-ekwu: Art ga-akpata mgbu, kpasuo iwe ma nupụrụ isi. Anyị na-eche banyere nka dị ka ụdị nkwenye onwe onye na mmekọrịta mmadụ na mmụọ nke Enlightenment. Mgbasa ozi anyị na-egosi ohere nke nka dị ka ike nke ise na steeti. N'ihi ya, nka abụghị enyo nke ị jidere n'eziokwu, kama ọ bụ hama ka ị ji eme ya.
Anyị na-amata ohere.
Anyị na-amụta. Anyị na-egwu egwu. Anyị na-azụlite echiche. Anyị na-enweta echiche site na ọchịchịrị. Anyị na-eji ọdịiche ahụ eme ihe. Anyị na-eme ka ọ dị egwu, ma ọ bụ mee ka ihe kwụsị. Anyị na-elekwasị uche anya. Anyị na-eme njikọ. Anyị na-agbanwe echiche gị. Anyị na-arụ ọrụ na ndò. Anyị na-achọ ihe mere jiri ìhè. Anyị na-enye azịza ya. Anyị na-eguzo. Anyị na-ebo ebubo. Anyị na-egwuri egwu na-egbuke egbuke n'ime obi anyị. Anyị na-ebu ya n'èzí.
Anyị na-asị: Anyị bụ PixelHELPER
Ndị na-adịghị ike na-ejikarị ike jikọọ
Gaa ma gosipụta onwe gị.
PixelHELPER cube gara gburugburu ụwa.
Idozi Rubik's Cube na vidiyo “gburugburu ụwa na ụbọchị 80” na-anọchite anya otu usoro nke ụmụ mmadụ gburugburu ụwa, nke PixelHELPER na-egosipụta nke ọma na ngwa ngwa igwe mmadụ na-ebi na gam akporo Playstore ma na-akpọ ndị na-ekiri ya ka ha mekọrịta.
N'oge ndụ, anyị na-ahapụ ọtụtụ ụzọ. Ọbụna na ndụ nke ndị ọzọ ndị ụzọ anyị nwere ike isi na-agafe otu ugboro nakwa na anyị nwere mmetụta dị ukwuu nke na ndụ ha nke oge ọzọ weere ọnọdụ dị iche. Agaghị enwe ekele maka ọrụ nke PixelHELPER Foundation kama inwe mmetụta dị mma na-adịgide adịgide na ọha mmadụ.
Anyị na-agụsi agụụ ike maka ụwa ka mma.
Humanism dị ka ahụmahụ mmekọrịta na ndụ iyi. Jikwaa nkesa site na emoticons na Facebook. Zombies enweghị agbụrụ, agba, ma ọ bụ okpukpe; naanị ụbụrụ! Ihe oru ngo a bu “Zombies without Border” na ahu onwe ya dika ihe ngosiputa enyemaka. Aha ahụ sitere na ọtụtụ kọmputa zombie nke a na-achịkwa na mpụga. Ebumnuche anyị abụghị ihe na - erughị azịza maka ọdachi niile metụtara mmadụ site na enyemaka mmekọrịta site na ndị na - ekiri site na ndụ. Ihe mgbaru ọsọ anyị: Oge 24 dị ndụ site na ebe dị ọkụ n'ụwa. So ndị na-ede akụkọ na mpaghara agha, ikesa enyemaka na ogige ndị gbara ọsọ ndụ ma ọ bụ ndị na-achụ nta ịchụ nta na Kruger National Park. Ngwaọrụ anyị: Ndị Facebook emoticons na-achịkwa igwe enyemaka ma na-ekpebi ihe a ga-eme.
Site n'echiche nyocha zuru oke, ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otú a ka anyị wee malite iyi iyi na njikwa njikwa uzo wee kpọọ ndị ọrụ "Zombies without Border" ka ha banye na iyi anyị. N'ụzọ dị otú a, anyị na-elekwasị anya na njegharị nke njikwa njikwa mmekọrịta ma na-eme ngwa ngwa mgbanwe na ndụ ndụ na ọnọdụ nke nsogbu ahụ.
Ihe PixelHELPER | Ngosipụta nke ngwa ahụ na Marrakech, Morocco
N'ihe nnọchiteanya nke PixelHELPER, 2009 nyere onyinye ahụ na-enweta "Malite ngbanwe onwe gị" maka ọrụ ya maka ndị na - enweghị ebe obibi.
Ụlọ ọrụ 2013 nke PixelHELPER bụ mgbasa ozi Shitstorm na-enweghị ebe obibi, nke ọtụtụ mgbasa ozi Germany, tinyere Süddeutsche Zeitung nwere isiokwu dị mkpa gbasara ihe anyị mere.
2014 mebiri mkpọsa NSA / Drone na mgbasa ozi 10 na ụlọ ọrụ nnọchiteanya US, na-enweta mgbasa ozi mgbasa ozi kwa izu.
Na 2015 ndị ​​ọhụrụ na-ere ogwe aka nke Dr. A mara Oetker Group na mba niile site na amụma amụma na Federal Ministry of Defense n’abalị.
Site na egwurugwu
PixelHELPER chọrọ ịkatọ mkpagbu nke ndị nwoke idina ụdị onwe na mba ụwa. E nwere ndị ka ọtụtụ mba n'ụwa dị ka Iran, Nigeria, Mauritania, Sudan, Yemen, Saudi Arabia ma ọ bụ na United Arab Emirates, ebe nwoke idina nwoke bụ iwu na-akwadoghị na ịta gị ahụhụ ọnwụ!
Ịhụnanya amaghi okike, enweghi akpụkpọ anụ ma ọ bụ okpukpe! Ịhụnanya enweghị ókè! Anyị chọrọ ịkọwa nkwupụta a, PixelHELPER, gburugburu ụwa site n'inwe ihe osise ọkụ "Site na egwurugwu".
Nsogbu oyi na-atụ maka ndị na-enweghị ebe obibi
Oge oyi na-eru nso & ndị na-enweghị ebe obibi chọrọ enyemaka anyị. Ihe ngwọta anyị: PixelHELPER nsogbu mberede oyi na-emegide ndị na-ajụ oyi n'okporo ámá Germany. Kwa afọ ndị Jamanị na-anwụ site na mberede ụgbọelu karịa ndị enweghị ebe obibi na-anwụ. Na Germany enwere ihe karịrị ọkara nde enweghị ebe obibi na mpụga usoro nchekwa ọha. Ugboro ugboro a na-eziga ndị mmadụ n'èzí ọnụ ụzọ mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru efu ma friza n'ụzọ zuru oke. A naghị edozi nsogbu nke enweghị ebe obibi na Germany n'onwe ya n'ụzọ ga-adigide. Nke a bụ ebe mmemme ịhazigharị maka ndị na-enweghị ebe obibi na-abanye. Malite na capsules mberede mberede iji chebe ndị na-enweghị ebe obibi site na ọnwụ ọ bụla na-enweghị ike izere, anyị na-ewu usoro nke na-alụso nsogbu ndị bụ isi nke enweghị ebe obibi, enweghị nchekwa, enweghị ohere ọrụ na nkewapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, wee nyere ndị mmadụ aka ịlaghachi ndụ nkịtị site na ntakịrị. na-enyere.
Anyị bụ nanị ụmụ oke enweghi oke enwere n'elu mbara ala ma ọ bụ na-achọgharị kpakpando dị nnọọ elu.
Onye guzobere PixelHELPER Oliver Bienkowski ya na nkịta okporo ụzọ Moroccan ET
Ọ bụrụ na inwee nsogbu ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga - eme, wee chọọ PixelHELPER November 15th, 2021Oliver Bienkowski
nnapu mgwoagha Android App Bahrain 13 Federal Chancellery Federal ọgụgụ isi ọrụ Ọrụ ọgụgụ isi mara mma ohia ọkụ China ego ego Erdogan Feuer osisi ịta freeRaif nnwere onwe nke echiche hercules enyemaka ndi mmadu mkpọsa mkpọsa Catalonia landmines Ịhụnanya amaghi oke Livestream Live iyi Enyemaka enyemaka Livestream loreley Morocco nke m NSA n'ụlọ Oberwesel ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Akuku Orlando agha Saudi Arabia igweanu Help spanish mmiri Spirulina Uighurs Uyghur nchekwaba onwe United Stasi nke America upcycling ogwe aka ahia Ee anyị na iṅomi! nlekota oru